गर्मीमा आँखाका लागि ३ मन्त्र... | Hamro Doctor News
गर्मीमा आँखाका लागि ३ मन्त्र...
यस्तो अमूल्य आँखालाई जाडोभन्दा गर्मीमा बढी खतरा छ । गर्मी मौसममा आँखा चिलाउने, बिझाउने समस्या बढी देखिन्छ । हाम्रो शरीरबाटै उत्पन्न हुने प्रतिक्रियाका कारण यस्तो हुने र मेडिकल भाषामा यसलाई ‘एलर्जी कन्जुम्टिभाइटिस’ भनिने आँखारोग विशेषज्ञ डा. इन्दुप्रसाद ढुंगेल बताउँछन् ।
सनग्लासः सनग्लासले घामबाट आउने खतरनाक अल्ट्राभाइलेट ‘बी’ किरण रोक्छ । छाँयामा बस्दासमेत सनग्लास प्रयोग गर्नुपर्छ । छाँयामा पनि अल्ट्राभाइलेट हुन्छ, सीधा घाममा भन्दा केही डिगी्र कम मात्रै हो । आँखामा धुवाँ–धुलो सीधा पर्न पनि सनग्लासले दिँदैन ।
हाइड्रेसनः आँखा स्वास्थ्य राख्न शुद्ध पानी निकै जरुरी हुन्छ । हरेक दिन कम्तीमा दुई लिटर पानी अनिवार्य पिउनुपर्छ, ताकि आँखामा हिडाइडे«सन(पानीको कमी) नहोस् । डिहाइडे«सनले आँखामा चिप्लोपना कम आउन सक्छ र आँखा सुक्खा भएर लाग्ने रोग निम्तिन सक्छ । पर्याप्त पानी पिउँदा आँखाको गतिविधिले गर्मीको प्रभाव सन्तुलित बनाउँछ ।
Last modified on 2019-06-25 15:13:56
बन्द कोठामा हिटर बालेर सुत्दा किन जान्छ ज्यान ?
जानौं चाकु, तिल र तरुल खानुका स्वास्थ्यवद्र्धक फाइदा